Wasiir janan oo doon ku tagay magaalada Kismaayo – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiir janan oo doon ku tagay magaalada Kismaayo
Allhadaaftimo January 31, 2020 January 31, 2020 Uncategorized
Wasiirka Amniga ee Jubbaland, Cabdirashiid Janan oo dhawan ka baxsaday xabsi ayaa la sheegay in uu gaaray magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsdan maamulka Jubbaland.
Sida ay booliska Soomaaliya sheegeen, Janan ayaa ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee Muqdisho, 28-kii January ee 2020-ka.
Telefishinka ay leedahay dowladda Jubbaland ayaa ku warramay in Janan uu hadda Kismayo ku sugan yahay.
Sida ay wararka sheegayaan, Cabdirashiid Janan wuxuu Kismaayo ku gaaray doon, balse ma cadda meesha ay doontaas ka soo qaaday.
Janan waxaa la xiray bishii August, 2019-kii waxaana lagu eedeeyay dambiyo culus” oo uu galay. Tan iyo xlligaas, hal mar ayaa maxkamad la horgeeyay.
Dowladda jubbaland waxay xariggiisa ku tilmaamtay afduub.
Ku xigeenka taliyaha booliska Soomaaliya, Sareeye-guuto Zakiya Xuseen, ayaa Talaadadii shaacisay in uu xabsiga ka baxsaday wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiida Janan. Waxay sidoo kale sheegtay in laamaha amniga ay ku raad joogaan Janan.
Wasiirka Amniga Jubblanad waxaa lagu eedeeyay inuu gaystay tacaddiyo ka dhan ah aadaha; waxaa ka mid “in uu dilay dad maxaabiis ahaa oo u xirnaa maamulkiisa”, sida ay sheegeen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha.
Previous Wakiilka Midowga Yurub Ee Soomaaliya Oo Diiday Kulan Ay Ka Dalbadeen Komishanka Cusub Ee Somaliland
Next Boqor Burhaaan oo lagu soo dhoweeyey Magalada sallala ee dalka Cumaan